UPS iifayile lomenzi ukwamkela Bitcoin for neelokhari - Blockchain News
EyoMdumba 1, 2018 admin
UPS iifayile lomenzi ukwamkela Bitcoin for neelokhari
ngenqanawe Global ezinkulu UPS bajonge ukwamkela Bitcoin ngokusebenzisa inkonzo ilokhari into-exchange, imvuthuluka patent esanda kupapashwa zibonisa.
UPS loya inkqubo iibhanki ilokhari ezinokuthatha iintlobo digital lwentlawulo, ngokutsho isicelo eyakhutshwa U.S. Patent sophawu Office (USPTO) ngoLwesine. Ukongeza kwiinkqubo intlawulo zemveli, ukufakwa patent uluhlu Bitcoin njenge lwemali kunokwenzeka ukuba ahlawule nge.
Ukufakwa sichaza iindlela ezahlukeneyo renters onokuhlawula ilokhari, echaza ngqo:
"Kumzekelo embodiments, ibhanki ilokhari singabandakanya ingongoma-of-yentengiso (POS) inkqubo ukwamkela intlawulo kubasebenzisi ngohlobo: … Bitcoin; kunye / okanye (5) naluphi na olunye uhlobo efanelekileyo intlawulo. "
in 2017, engaphezulu kwe 20 imvuthuluka patent kukhutshwa yi-USPTO ekhankanywe Bitcoin njenge inkqubo yentlawulo kunokwenzeka. Nangona inani lehla kancinci ukususela 2016, engaphezulu kwe 50 imvuthuluka patent kukhutshwa yi-arhente kule minyaka mibini yokugqibela ibonisa le layini yokucinga.
Blockchain Observatory kunye neForam ukuba Zisa EU ukuba "Usetyenziso" of Blockchain Tech
EU uqala Blockcha ...
Coinbase uqala cr ...
Post Previous:MasterCard i-CFO: Cryptocurrency ukuthenga ukonyuswa imali yethu lwabathengi
Post Next:Blockchain Observatory kunye neForam ukuba Zisa EU ukuba "Usetyenziso" of Blockchain Tech